भदौ २६, रोल्पा । बितेका ३ वर्षमा रोल्पा जिल्लाबाट १६० महिला हराए । यसरी हराएकामध्ये प्रहरीको मद्दतमा ९५ जना फेला परे भने अझै ६५ जना बेपत्ता छन् । हरेक वर्ष किन यति ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरु हराउने गर्दछन ? हराएकाहरु कसरी फेला पर्छन् ?
परिवारका सदस्य हराउँदा आत्तिएर प्रहरीलाई खबर गर्न आउने तर, सम्पर्कमा आउँदा प्रहरीलाई जानकारी नगराउने कार्यले पनि हराउनेको सङ्ख्या अधिक देखिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । हराएका नागरिक सम्पर्कमा आएरनआएको जानकारी सुरक्षा निकायमा हुनु जरुरी भए पनि त्यसका लागि प्रहरी वा अन्य सरकारी निकायले संयन्त्र निर्माण गर्न नसकेको पाइएको छ । नागरिकको कत्र्तव्यबोध गर्दै हराएकाहरु सम्पर्कमा आउने बित्तिकै प्रहरीमा खबर गरे तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सहज हुने प्रहरीको अपेक्षा छ ।
बालश्रमिकहरुलाई नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र ९सिविन० लगायतका संस्थाले समेत उद्धार गरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन् । त्यस्ता बालबालिका प्रहरीमार्फत परिवारसम्म पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ललितपुरको एक संस्थाले रोल्पाका एक दर्जनभन्दा बढी बालबालिकालाई ईंटा भट्टाबाट उद्धार गरी प्रहरीे तथा महिला बालबालिका कार्यालयको रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।
महिला हराउने यो क्रमले परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । हराएको लामो समयसम्म अवस्था यकिन हुन नसक्दा उनीहरुको दैनिकीमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको बताइन्छ । खोजीका लागि भन्दै काम छोडेर बारम्बार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्दा उनीहरुको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु नै यसरी हराउने गरेकाले खोजीका लागि त्यस्ता परिवारले थप आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको छ ।